inyama Horse, namasoseji kanye ukuphuma kuso, namuhla uju yangempela. Kuyasiza kakhulu kunezinye izinhlobo inyama, iqukethe ephelele amino acid ukwakheka wamaprotheni ne ngokushesha siyagwinyeka izikhathi 8 kunenyama. Ukudla Hypoallergenic futhi inyama yehashi kusiza ukunciphisa amazinga egazi cholesterol kanye ukwandisa elithwala umoya-mpilo. Kunezinhlobo eziningana ihhashi amasosishi isibonelo, "Kazy", "shuzhuk", "Mahan". Lezi izitsha kazwelonke emaphakathi Asian kuhluke ukupheka ubuchwepheshe. Kulesi sihloko sichaza ngokuningiliziwe mayelana amasosishi "Mahan" futhi ukwethula iresiphi ukupheka ekhaya.
"Maha" - jerked amasosishi okwenziwé kuphela kusukela ihhashi inyama. Ngiphakathi ingulube noma yenkomo is ezingafanelanga wakhe. Kwalona nje igama elithi "Mahan" amasosishi livela isakhi esiyinhloko lokhu izitsha elise-Asia Ephakathi futhi elihunyushwa ngokuthi "ihhashi" noma "ihhashi inyama".
"Mahan" ihlukile ukunambitheka obucayi. Umkhiqizo ine isakhiwo compact, kodwa ngokoqobo liyancibilika emlonyeni wakho. Lokhu "Mahan" - amasosishi okumelelwe isithombe ngenhla, cishe abamnyama. Lapho ubuka ngalé kwalo ukukhanyisa kubonakala ngokucacile luhlaza irubi. It has a isici cross-section, ezingase zibangelwe inyama nengulube futhi nezixhobo enkulu namafutha. I engavamile walesi ayi jerked wukuthi ngesikhathi enza yayo akazange asebenzise yenkomo, kodwa kuphela izingcezu yonke inyama namafutha. Nokho, Ongoti lo mkhiqizo weqiniso uyakukholelwa kuba kunalokho inzuzo, ugcizelela isoseji yemvelo "Mahan".
Ukwakheka isoseji kuyinto eduze zemvelo. ihhashi inyama kuphela esetshenziswa womshini lo mkhiqizo jerked, ihhashi amafutha, eluhlaza, usawoti kanye izinongo. Traditional "Mahan" ukwenza ngesandla kuphela, futhi inyama ezifuywa ngokukhethekile amahhashi. Izilwane fed uye wakwenza ke inyama ihhashi etholwe nge ungqimba elincane aminyene amafutha. "Mahan" akwenziwa kusukela inyama workhorses ezisetshenziswa njengeziwusizo izilwane ezithwalayo. Ubudala sesilwane ngeke sidlule eminyakeni emibili.
Ngo womshini isoseji it is kunakwe hhayi kuphela ukwakheka kodwa futhi isilinganiso izithako. Ngakho, ngokwesibonelo okucishe kube yizo ihhashi amanoni 5-10% we isisindo ingqikithi inyama. Nokho, abakhiqizi ezahlukene isoseji lokhu isilinganiso kungase kungabi okufanayo.
Horse inyama umvimba "Mahan": ubuchwepheshe yokukhiqiza
Ngisho ngezinga ezimbonini real "Mahan" senziwa ngesandla kuphela kusuka fresh, hhayi eqandisiwe ihhashi inyama.
Yonke inqubo yokukhiqiza zingahlukaniswa izigaba eziningana:
Boning - ukususwa pomyshechnoe ihhashi inyama namathambo. Le ndlela zokuhlela isilwane izidumbu ivumela ngokushesha futhi kangcono ukwenza olandelayo inqubo isinyathelo.
Ukusika - ukususwa sezicubu zezinzwa futhi imithambo inyama yehashi. Inhloso yalesi simiswe ukuze uthole izinga inyama eliphakeme. Wenziwe isoseji "Mahan" kusukela ihhashi okusezingeni eliphezulu ngaphandle emithanjeni namafilimu. Ngemva kokulungiselela inyama eluhlaza iyasikwa ibe usayizi enkulu izingcezu portioned ka-3 cm ohlangothini ngalunye.
Ambassador kanye nokuvuthwa of inyama - kulesigaba kuze uzilungiselele inyama izingcezu engeza usawoti kanye izinongo (ushukela, pepper, garlic, njll ...). inyama Ihhashi okuxubile kahle washiya njengoba enjalo ngoba yokuvuthwa kule esiqandisini. Isikhathi salesi sigaba kuyinto kwezinsuku ezimbalwa, ngombandela wokuthi inyama akusho ukwengeza amanye accelerators yokuvuthwa.
Owenza - kulesigaba umkhiqizo lulwimi siphelile. Inyama eyayigcwele bezinhlamvu zemvelo, ogama ubukhulu uqobo 40 mm, futhi ithunyelwa omiswe.
Omiswe - yokuvuthwa imikhiqizo kwakhiwa kwenzeka amagumbi ekhethekile izinsuku ezingu-40. Umvimba Horse "Mahan" ayikwazi ukuba ukushisa kabi. Yena jerked ekulungiseleleni indlela ngawo ekwazile ukugcina nombala engokwemvelo futhi ukunambitheka.
Umvimba ngomumo eyenziwe It is ukusika selehlile lokushisa 0-7 degrees fomu. I ukushuba esethatha ucezu ngalunye kufanele kube hhayi kuka 1.5 mm.
imicabango yabantu Abantu sika tasters umvimba "Mahan", njengenjwayelo, axutshwa. Yiqiniso, okokuqala kunakho konke, konke kuncike umenzi. Kodwa ngisho ekukhipheni le isici bungabonakala emaqenjini amabili esizimele okubuyayo omubi isoseji.
"Mahan" abathengi ofana nalona olandelayo:
flavour zemvelo ezithakazelisayo;
isakhiwo yemvelo kanye nezinzuzo emzimbeni.
Negative Izibuyekezo ikhasimende zimi kanje:
khona amakhemikhali e izihloko abakhiqizi kakhulu (flavour, ukunambitheka enhancers, imibala, omfisha, Antioxidants);
ukusetshenziswa emhlabathini inyama nengulube, hhayi uthathe yizicucu;
ukunambitheka ethize, khona amafutha amaqhafuqhafu oqoshiwe.
Lapho ekhetha imikhiqizo jerked kubalulekile ukuba banake nenqubo izinga, okumele libe isoseji real "Mahan". Lesi sakhiwo kanye yayo (non-ukugxusha), futhi umbala, kanye nokusungulwa. Imibono engenhla kanye nezincomo kuzosiza ukuthenga isoseji esihlwabusayo ngempela futhi unempilo eyenziwe ihhashi inyama. Phakathi naleso sikhathi, esinamandla kungenziwa kuphekwe ekhaya.
Yeka ukuthi kuyinto "Mahan"?
Noma ubani ofuna ukuzama eliphezulu ngempela futhi okumnandi "Mahan", lapho Ukwakheka ayinazo izithako zokwenezela, kufanele wazi ukuthi lokhu Pudding akukwazi ezishibhile. Izindleko Isilinganiso amakhilogramu komkhiqizo jerked wenza kusukela ihhashi inyama, ihhashi amafutha, usawoti kanye izinongo ngayinye, cishe ruble 800-1000 ngalinye 1 kg.
Sausage "Mahan" ngokuvamile adayiswa lonke noma usike izinkwa enesisindo 400 noma 200, ubude yonke induku ingase ibe 40 cm.
"Mahan" (isoseji) iresiphi ekhaya
Ngokuba ukulungiswa isoseji ezomile kudingeka inyama yehashi kanye nehhashi amafutha, chilled bese uthathe izingcezu 5-10 mm ukujiya. Isilinganiso inyama fat isoseji ngokuvamile 10: 1, ie 10 kg inyama kuthatha 1 kg of fat.
Ngemuva ukusika zonke izithako anosawoti ihhashi inyama izinsuku 3-5. Ngenxa yale njongo esitsheni ne tincetu inyama sengezwe 380 g sikasawoti, 200 ushukela nesweli extruded, pepper ukunambitha. Zonke izithako kahle exubile, okwathi ngemva kwalokho impahla eluhlaza uthunyelwa uvuthwe ezingeni lokushisa 2-6 degrees egumbini umoya. Khona-ke inyama kufanele bagcwalise igobolondo elingenalutho (noma i-collagen casings Belkozin) wabiza omiswe.
Ekhaya, isoseji "Mahan" omiswe mayelana 30-45 kwezinsuku ezingaba ngu-70% egumbini umoya kanye nomswakama. Gcina ke esiqandisini kungaba izinsuku 120, oyi-zihambisana isinkwa isikhumba ephepheni ngalinye.
Uhlelo Sikhungo: okulotshwe encwadini ikhava kuya qhuba